Rock အဆိုတော်ဆ၇ာဝန်မလေး မဒိမ်းကျင့်ခံ၇ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » Rock အဆိုတော်ဆ၇ာဝန်မလေး မဒိမ်းကျင့်ခံ၇
Rock အဆိုတော်ဆ၇ာဝန်မလေး မဒိမ်းကျင့်ခံ၇
Posted by Wai Phyoe on May 3, 2012 in Arts & Humanities, Business & Economics, Computers & Technology, Creative Writing, Entertainment, Health & Fitness, Myanmar Gazette, News | 32 comments
စိတ်ဝင်စားစ၇ာကောင်းလို့၇ွာထဲကလူတွေကို share ပေးလိုက်ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကတော့ဒီလိုပါဦးတေဇ တို့လူတစ်စုက အဲ့ဒီ အဆိုတော်ကိုသိန်းငါးထောင်နှင့်ခေါ်ခဲ့သည်ပာုသိ၇ပါသည်။ သူကလဲလက်မခံ သူ၇ဲ့ အပျိုစင်ဘ၀ကိုလက်မခံနိင်သဖြင့် ခပ်မာမာပင် ပြန်ပြီးငြင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ငြင်းခဲ့သည်ကို တေဇ မှမခံမ၇ပ်ဖြစ်ကာ လူ၇ုပ်မာကွက်သုံးပြီး show ပွဲတစ်ခုတွင်ဖျော်၇ည်ထဲဆေးထည့်ကာ လုပ်ကြံပြီ တေဇနှင့် သူ့အပေါင်းပါ နှစ်ဦးမှ မတ၇ားကျင့်ကြံခဲ့ပြီး သိန်း၃ထောင်ကိုလျော်ကြေးအဖြစ်ပေးခဲ့ပြီး မယူလဲမတတ်နိင် ကြိုက်တာလုပ်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်လဲ မသေချာသဖြင့်နာမည်ကိုတော့မဖော်ပြလိုပါ။
ထိုအဆိုတော်အသားေ၇မှာ သူ့နာမည်နှင့်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပြီး ခ၇စ်ယာန်ကိုးကွယ်သူဖြစ်ပါသည် နာမည်ပျက်လုံးဝမ၇ှိပါ မြန်မာပြည်လေဒီဂါးဂါးပာုတင်စားနိင်ပါသည် ။ယခုသတင်းမှန်ကန်ပါက သူလည်း သူ့သီးချင်းအတိုင်း၇င်ထဲတွင် အတွင်းကြေ ဖြစ်လောက်ပါသည်။
အယ် .. မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်ဟယ် …. ။
အဆိုတော်တွေ ဘယ်ရှိုးပွဲသွားသွား တစ်ကိုယ်တည်းမသွားတတ်ဘူး .. အိမ်က တစ်ယောက်ယောက်ပါလျှင် ပါ ..မပါလျှင်တာင်မှ … သူ့ဝေယျာဝစ္စလုပ်ပေးမယ့် .. အိမ်ဖော် တစ်ယောက် နှစ်ယောက်လောက်ကတော့ ပါတာချည်းပါပဲ … ။
နောက်တစ်ချက်က … ဒီအဆိုတော်ရဲ့ အနုပညာအရည်ချင်းကို မကြည့်သေးပဲ ရုပ်ရည်ကို အရင်ကြည့်လျှင်တောင် ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်ကလွဲလျှင် ယေကျာ်းတွေအတွက် ၊ တခြားဘာမှ စွဲလောက်စရာမရှိဘူးထင်တယ် … ။ အပျိုစင်ပဲဖြစ်ဦးတော့ …. ဒါကို သိန်း ငါးထောင်ဆိုတော့လည်း ….
ဖျော်ရည်ထဲမှာ ဆေးခတ်တယ် ထားဦးတော့ … လွယ်လွယ်နဲ့ ဆိတ်ကွယ်ရာကို ခေါ်သွားဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး .. နာမည် ကြီးသထက်ကြီးချင်လို့ … fake လုပ်တာ ထင်တာပဲ … ။
ပေါက်တတ်ကရ လုပ်ကြံသတင်းဖြစ်ဖို့.. ၉၉ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်..
ဒါတွေနဲ့ပဲ.. ပြီးကြတော့မှာလားဟင်င်င်…။ :?
အင်း ဟုတ်တယ်။ ကျမတို့တွေ ဒါတွေနဲ့ပဲမပြီးအောင် သူကြီးကလမ်းမှန်ပြပေးလေ အမေရိကကောင်းကြောင်းချည်းပဲတော့မသိချင်ဘူး။ မကောင်းတာလေးတွေ အားနည်းချက်လေးတွေ စီးပွားရေး လူမှုရေး ပညာရေး နိုင်ငံရေး ဘာဘာညာညာလေးတွေ အားရင်ရေးပေးပါဦး။ ပြီးတော့ တစ်ခြားနိုင်ငံက အမေရိကန်ပေါ်အမြင်လေးတွေကော ပြောပြပေးပါ။
ဖြူဖြူကျော်သိန်းက ကျမအမြင်မှာတော့မဆိုးဘူး..လှတယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ အရပ်အမောင်းမလှတာကလွဲလို့…။ သိပ်လှတယ်လို့မဆိုနိုင်ပေမဲ့ မိတ်ကပ်မပါသဘာဝအတိုင်းဆို ပိုကြည့်ကောင်းမယ့်ပုံပါပဲ။ သူ့အသားအရေဟာ လူဖြူကြိုက်ပါ။ အဲလိုမျိုးအသားအရေအညိုရင့်စိုစိုကို လူဖြူ..မိန်းမယောက်ျားမရွေး အင်မတန်သဘောကျဆိုပဲ။ သူ့ပုံစံက အမြင်ကတ်စရာနည်းနည်းတော့ကောင်းပေမဲ့ သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်တဲ့အမူအယာက ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။ ကောလဟာလဆိုပေမဲ့ အတွင်းသိတွေကပြောတာဆိုတော့ နည်းနည်းတော့မှန်မလားပဲ။ ချမ်းချမ်းက သူ့ဗမာရည်းစားနဲ့ပြတ်ပြီး ပြင်သစ်တစ်ယောက်နဲ့တွဲသတဲ့။ အဲဒီပြင်သစ်က ချမ်းချမ်းကိုသိပ်ဂရုစိုက်ဆိုပဲ။ ဘာသာချင်းလည်းတူ အနုပညာညီအစ်မတွေဆိုတော့ ချမ်းချမ်းက အဲဒီပြင်သစ်နဲ့ဖြူဖြူကျော်သိန်းကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါရော။ အဲဒီမှာစတာပဲ။ ဖြူဖြူကျော်သိန်းအစ်မက အခုပြင်သစ်မှာလို့ပြောတယ်။ သူ့ယောက်ျားလား ရည်းစားလား ဘာလား သူလည်းပြင်သစ်ပဲ။ ဒီတော့ ဖြူဖြူကျော်သိန်းကလည်း ချမ်းချမ်းမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ပြင်သစ်ကို အဆက်အသွယ်လုပ်ရာက နောက်ဆုံးတော့ အဲဒီ၂ယောက်ငြိသွားလေသတည်းပေါ့။
သူများကိုယ်ရေးကိုယ်တာပြောရင်းအတင်းများဖြစ်သွားသလားမသိ။ အဓိကပြောချင်တာက လူတိုင်းအလှကိုခံစားတာခြင်းမတူတာကိုပြောချင်တာပါ။ အရှေ့တိုင်းသားအများစုက အသားဖြူမှလှတယ်လို့သတ်မှတ်ကြတာမို့ အသားမဲရင်ပဲရုပ်ဆိုးသလိုလို အလှပဲယုတ်လျော့သလိုလို။ အဲလိုတွေကြောင့်လည်း အသားဖြူဆေးတွေ ရောင်းမလောက်ဖြစ်နေတာပေါ့။ တစ်ကယ်က အလှကိုခံစားတတ်တဲ့အမြင်မကျယ်သေးလို့ပါ။ လူတိုင်းမှာအလှကိုယ်စီရှိတယ် ထင်တာပါပဲ။ ဥပမာ ကပ်ပလီတွေကိုကြည့်ပါ။ (ကပ်ပလီအားလုံးလှတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်) သူတို့ကိုယ်ခန်ဓါကိုကြည့်ပါ။ ကျစ်လစ်နေတာပဲ။ ကြွက်သားတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့မြင်းတစ်ကောင်ရဲ့ကိုယ်လုံးမျိုး။ သိပ်လှတယ်။
လုပ်ကြံသတင်းမှန်း အသိသာကြီးကို ..လက်ခံဆွေးနွေးတာကို ပြောတာပါ..
ဦးတေဇလို.. နိုင်ငံတကာသွားနေတဲ့ မီလျှံနာက.. မြန်မာအဆိုတော်တယောက် ဒေါ်လှ၆သိန်းလောက် ပေးပါ့မလားကွယ်..
ဒေါ်လှ၆သိန်းဆို.. ဟောလိဝုဒ်တောင် တားဂက်ထားလို့ရနေတဲ့ဟာ..ပဲ..ဟာကို..
အဲလိုပြောတော့.. အဆိုတော်ကို အထင်သေးတာမဟုတ်ပါဘူး.
အဲဒီအဆိုတော်ရဲ့ ဂုဏ်နဲ့.. နာမယ်ပျက်မရှိတာကို.. လေးစားပါတယ်..။
အသားညိုပြာညက်တာဟာ.. ယူအက်စ်..ဂျပန်တွေမှာ.. လူကြိုက်များပါကြောင်း.. ဟိုးးးအရင်ကတည်းကရေးဖူးပါတယ်..။
ဒီအတင်းက.. တကွက်နဲ့.. ၂ကောင်များကျမလားလို့.. လုပ်စားတဲ့ ကလေးကွက်ကြီး..လို့.. ပြောချင်တာဖြစ်ပါကြောင်း..
ဒီသတင်း က ကောလဟာလ ထင်ပါတယ်။
ကျန်တဲ့ လူတွေ သူတို့ သိတာ ကြားတာတွေကို ဆက်ပြောကြပါလိမ့်မယ်။
မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲ ထင်ပါသည်။ အဆိုတော်နံမည်သာမပြောတာ ဘယ်သူလဲဆိုတာ အရိပ်မဟုတ်ပဲ
ကွယ် မြန်မာပြည်ရဲ့ လေဒီဂါဂါ ဆိုကတည်းက
ကိုချောကလက်ကြီးရေ .. လိုက်ဖ်ရှိုးတွေ ၊ VCD တွေမှာတော့ သူက မြန်မာအသားရည်နဲ့ … ကိုယ်ခန္ဓာအချိုးကျကျ ပြေပြစ်ပေမယ့် … အပြင်မှာတော့ … အဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူး .. ကျီးကန်းလေးလို မည်းမည်းလေး … လူကောင်ကလည်း… သူသူကိုယ်ကိုယ်လိုပါပဲ …. ။ အဆစ်အကွေ့တွေကလည်း … သိသိသာသာကြီးကို မည်းတယ် … ။ မျက်ဝန်းတစ်ဝိုက် ပန်ဒါမျက်ဝန်လို လုပ်ထားတာကတော့ ..သူ ရဲ့လိုဂိုလို့ပြောရမယ် … ။
ထရိတ်မတ်ကတော့ လျှာကြီးထုတ်ပြီး …. တလားလားနဲ့ သီချင်းဆိုပြတာပါပဲ … sexy ဖြစ်မဖြစ်တော့မသိဘူး … သူတက်ခါစက လုပ်ပြတာ … ရွံ့စရာကောင်းတယ်လို့တောင် ထင်တယ် …။ အဲ့လို လုပ်ပြလို့လည်း နာမည်ကြီးတာကိုး …. ။
မြန်မာပြည်မှာ ကောလဟလကို လက်နက်တစ်ခုအနေနဲ့ သုံးကြတာ တော်တော်ဆိုးတာပဲ
ဟိုးအရင်ဆယ်စုနှစ်များက ဟေမာနေ၀င်းဘာလုပ်ခံလိုက်ရလို့ ဆိုတဲ့ ကောလဟလတွေက တော်တော်ကိုပျံ့သွားခဲ့တာ တောနယ်တွေအထိရောက်ရောပဲ
ကောလဟလကြောင့် ဘာမှ မဖြစ်တဲ့သူတွေရှိသလို မက်စ်အချိုရည်ဆို ရောင်းအားကျသွားလောက်အောင် ခံလိုက်ရတယ်
ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေ ပြင်းထန်လာတဲ့ခေတ်မှာ ဒါ သာမန်ကောလဟလလေးပါလို့ လျှော့တွက်လို့မရဘူး
သိတာနဲ့ ချက်ချင်း ပွင့်လင်းမြင်သာစွာနဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်တာ ရှင်းလင်းတာ လုပ်ပေးဘို့လိုတယ်
တချို့ကောလဟလဆိုတာလဲ တကယ်က သတင်းအဖြစ်နဲ့ မှန်ချင်မှန်နေတတ်တာရယ် ရွာထဲက အသားဖြူဖြူ ရုပ်ချောချော နဲ့ ညစောင့် အဲ တံခါးစောင့် လုပ်ဖူးပါတယ် ဆိုတဲ့လူကြီး လှည်းတန်းကကောင်မလေးနဲ့ ထွက်လာတဲ့ အသံက အမှန်အကန်လို့ သိရတယ် ဗျ ၊ အခုဆို ဗေဒင်ဆရာက ကောင်မလေးတွေ ထပ်မနှောက်ယှက်အောင် ယတြာချေခိုင်းထားလို့ အိမ်အ၀င် မှာ ဖတ်..ဖတ်…ဖတ်…ဖတ် လုပ်နေရတယ်ဆိုတာ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ၀န်ခံထားတာလေး ကြားမိလို့ ကောလဟလ မဟုတ်မှန်း သိရတာရယ်
ဒါပေမယ် မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာ
သူအနုပညာ ကို နှစ်သက်ပါတယ်
sexy တော်တော် ဖြစ်လာတယ်လေ
မဆီမဆိုင် ကိုနိုဇို ကို အပေါင်းဝင်ပေးသွားတယ်။
တကယ်တော့ ဗျာ အဲဒီလူက တံခါးစောင့်လုပ်ရင်း ဘယ်ကောင်မလေး ဘယ်လိုဆိုတာ လိုက်ကြည့်နေတာဗျ။
ဖြစ်နိုင်ဘာဘူးဂျာ သူကို သိန်းငါးထောင်ပေးမလားလို့ တစ်ကယ်ထဲမှ ပဲ သူထက်သာတာတွေကို တစ်ပုံကြီးရယ် အများကြီးယူလို့ ရတယ် အဲပိုက်ဆံနဲ့ဆို ။ ပေါက်ပေါက် ရှာရှာဗျာ ပေါင်ဖြူမလေးတွေဆိုတော်သေး ခုဟာက ကပ်ပလီနဲ့ နင်လားငါလားလောက်ကို အင်းလေ ပြောတော့ပါဘူး။
သည်လိုမှမဟုတ်လျှင်တော့ တေဇ လောက်တုံးသည့်လူ သည်ကဗ္ဘာမှာရှိရော့မထင်ဗျား။
သူကြီးရွာကလည်းဝင်ရတာခက်လိုက်တာ။သူများပြလို့ proxy ကျော်ဝင်မှပဲရတော့တယ်။
ဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ် နော် သူရု ပ်ကို မြင်၇ရင် ရှိနေတဲ့ အရှိန်လေး ကျသွားလို့ စိတ်ဓါတ်ပြောပါတယ် ..နာမည်ကြီးအောင် ဖွတာနဲ့ တူပါတယ်ဗျာ ပညာနည်းတဲ့ ကျွန်တော်မျိုး သူ့ သီချင်းတွေလဲ နားမလည်ပါဘူးဗျာ
အော်ပြောမနေပါနဲ့တော့။ ဟိုတခါရွာတရွာကိုရောက်သွားတော့ အဲဒီရွာမှာဖြူဖြူကျော်သိန်းအခွေ ဖွင့်ထားတယ်။ ကျွန်မကလဲစပ်စုစိန်ဆိုတော့မေးကြည့်တာပေါ့။ အော်ဒီရွာမှာဖြူဖြူကျော်သိန်း ကိုကြိုက်တယ်လား လို့မေးတော့ မကြိုက်ပါဘူး၊ သူ့ပုံစံကရီရလို့ဖွင့်ထားတာတဲ့။ အဲလို အားပေးကြောင်းပါ။
ဖြစ်နိုင်ချေ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၅၀ အောက်တွင် ရှိကြောင်းပါ ။
သူကြီးရေ…အခြေအမြစ်မရှိသော သတင်းများကို ပယ်ဖျက်ပေးပါရန်တောင်းဆိုပါတယ်။
တော်သေးတာပေါ့ ဆရာဝန်အဆိုတော်မလေး ဆိုတော့…နောက်မှ လေဒီဂါဂါဂျီးဆိုလို့ 
အဆိုတော်ခင်မျာ .. ဒီ သတင်းထွက်လာတော့ သေချင်စိတ် ပေါက် သွားမယ် မထင်ဘူး .. မန့်တာတွေ တွေ့မှဘဲ သေချင်စိတ်ပေါက်သွားမယ်ထင်ပါသည်။
လူတိုင်းကိုယ်စီ သူ့ အလှနဲ့ သူ ရှိကြပါသည်။ ဖြူတာကြိုက်သူရှိသလို မဲတာမှရွှေတုန်းပါလို့ ထင်သူလည်း ရှိပါတယ် ။ လောကကြီး အားလုံး အကြိုက်တူသွားရင် (ဥပမာ-ဖရဲတစ်ယောက်ကိုဘဲ အားလုံးဝိုင်းကြိုက်နေလို့ မဖြစ်ဘူးလေ) :grin: :grin: မဖြစ်လို့ သူ့အကြိုက် ကိုယ့်အကြိုက်ရှိကြပါလိမ့်မယ်။ ဆိုတော့…..
ဒီသတင်းဟာ အမှန်ဆိုခဲ့ရင်…. အများစုမန့်တာကို သုံးသပ်ရတာတော့ ဖြူဖြူကျော်သိန်းဘက်ကတော့ မနာ
ကြပဲ ..သိန်းငါးထောင်ပေးတဲ့ဘက်က နာနေကြပုံပဲနော်။ ဖြူဖြူကျော်သိန်းမှာလည်း သူ့အလှနဲ့ သူ့အရည်
အချင်းနဲ့ပါပဲ… သူ့လိုဆရာဝန်၊အနုပညာရှင်ဖြစ်ဖို့ ပါရမီပါကြလို့လား ။
တကယ်တော့ မိန်းကလေးချင်းကိုယ်ချင်းစာတရားနဲ့ ကောလဟာလပဲဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
တော်ကြာ ရွှေစင်နဲ့ ပြောတဲ့ သူနဲ့ နပန်းလုံးနေရဦးမယ်..ဟီးဟီး
အသားမဲပေမယ့် နူးညံတာလေးတွေ ရှိမှာပါ။
ဖြူရဲ့ဆွဲဆောင်မှု့စတိုင်နဲ့ အခြားမက်လောက်စရာတွေ ရှိပါလိမ့်မယ်။
တကယ် မဟုတ်ပစေနဲ့ ပဲ..ဆုတောင်းပါတယ် ။ အဲဒီ အဆိုတော်..က တော်တော် တော်ပါတယ် ။ကျွန်တော်ကတော့ သူ့ ရဲ့ အားမာန်းအပြည့် နဲ့သီချင်းဆိုတဲ့ ..ဟန်..နဲ့သူ့ အနုပညာကို လေးစားပါတယ် ။
မဟုတ်ပါစေနဲ့။
မဟုတ်ပါဘူးဆိုမှ မဟုတ်ပါစေနဲ့ ဆုတောင်းနေစရာတောင် မလိုပါ။ နောက်တစ်ခု အဲလိုပေါက်ကရတွေ ပေးမတင်နဲ့လေ။
Weekly Eleven နာမည်ကျော် အယ်ဒီတာချုပ် နာမည်ကိုလည်းဖျက်သေးတယ်။
မဟုတ်ပါစေနဲ့ဘဲ ဆုတောင်းပါတယ် မဟုတ်တဲ့သတင်းမှန်းလည်းသိသာကြီးပါ မဖြူလည်း သူ့အပျိုစင်ဘ၀ဘယ်လောက်လောက်ပေးပေးလဲမယ်မထင်ပါဘူး သတင်းအမှားကိုတို့မန်းဂေဇက် ရွာသူ/သားတွေဆွေးနွေးနေတာကိုက အချိ်န်ကုန်စေပါတယ်